Obstetricians And Gynecologists Job Description / Duty Template And Mabasa – JobDescriptionSample.org
musha / Uncategorized / Obstetricians And Gynecologists Job Description / Duty Template And Mabasa
superadmin Chikumi 28, 2016 Uncategorized Leave mhinduro 1,514 Views
Vanachiremba vanopa utano mabhiri chokuita basa kana maternity uye vaya wanikidza, mubato, uye kubatsira kudzivirira zvemupiro Vakadzi, kunyanya avo kufurira kubereka kwacho. Aigona zvakare kupa mukuru dzokurapa vakadzi.
Chengetedza uye kero Vakadzi.
Kuzivisa unyanzvi uye kurukura pakuongororwa kana kupiwa mishonga kushandisa vatengi.
Bata zvirwere zvechikadzi nhengo.
Monitor peopleA zvirwere uye kuvandudzika uye aongorore patsva mhinduro sezvinodiwa.
Zvimwe Kuvhiya sezvo kana kuita cesarean zvikamu nezviwanikwa peopleWI utano uye kubudisa vana vakachengetwa.
Taurira kana vanotsiva chingamubatsira, mishonga, uyewo Kunyanya kurapwa kuti vamwe kurapa kana kuderedza chirwere, chirwere, kana kukuvadza.
Ongorora tarisa-up mashoko, nyaya, cheki makomborero, kana magwaro kuongorora mamiriro murwere.
unganidza, faira, uye rambai kuramba munhu mashoko, dzakadai inhoroondo vezvokurapa, nyaya, uye bvunzo zvabuda.
Tungamirira varwere uye munharaunda vanhu pamusoro Kudzivirira chirwere, uye basa, utsanana.
Rondedzera murwere kuti nyanzvi kuti zvimwe kana utano nyanzvi kana zvichidiwa.
Bvunza kana kupa mamwe vanachiremba vane kushanyira mhinduro.
Nokukurumidza uye rinoronga nezviito vanoita , vadzidzi, vabatsiri, nyanzvi, vanamukoti, pamwe nemamwe zveutano vashandi.
nzira, kushandisa, kana vanoita utano zvikumbiro mu masangano, kana nharaunda pamusoro mushonga uye kudzivirira tsaona kana zvirwere.
Gadzirira Govt uye akasimba mishumo nomudonzvo uchapupu, dhirivahari, achifa, uye chirwere Stats, kana zvichida vanachiremba mukurumbira munhu.
Kuita kudzidza kugadzira kana kutarisa kurapwa, zvinodhaka, kana unyanzvi kudzivirira kana kudzora chirwere kana kukuvadzwa.
Basa Zviito Vanoda
Kuverenga Kunzwisisa-Kunzwisisa ndima uye zvakasikwa kugutsikana nebasa mapepa vari chokuita.
Active Kuteerera-achivapa ruzivo yose chii vamwe vanhu vari kutaura, kuwana nguva uye simba kuti kuziva zvinhu zvaakasikwa, kumbobvunza queries sezvo akakodzera, uye kwete kukanganisa dzimwe nguva kuti vari kukodzera.
Kubereka-On mapepa kwete sokuita kuti zvinodiwa mumusika kukurukura zvakanaka.
Kutaurirana-Kutaura nevamwe kugoverana mashoko effortlessly.
Masvomhu-Kushandisa Maths kugadzirisa matambudziko.
Technology-Utilizing mhinduro uye nenheyo nesayenzi kugadzirisa matambudziko.
Kufunga kuti vachishoropodza-Utilizing mafungiro uye chikonzero kusvibisa hwakaipa uye pakugona kusarudza nzira, pfungwa kana nzira nematambudziko.
Active Kudzidza-Kuziva mashoko mutsva nechirevo chokuita chazvino uye zvinogona matambudziko uye zvisarudzo.
Kudzidza Nzira-achisarudza uye utilizing educationANDtutorial Nzira uye pachishandiswa hunokodzera chaiyo mamiriro ezvinhu apo kudzidza kana kudzidzisa nyaya dziri itsva.
Monitoring-kutarisira / Kuona functionality yakawedzerwa vanhu, pachako, kana makambani kuti kuitika kana kutora remedial zviito.
Social Perceptiveness-Kuva vanoziva vamwe’ Kurerekera nei vanopindura sezvo zvavanoita uye ruzivo.
Kufambisa-Kugadzirisa zviito ukama nevamwe’ maitiro.
Salesmanship-Kuvanyengetedza vamwe kuchinja miitiro kana misoro yavo.
Mediation-Kupa vamwe pamwe uye vachitsvaka ayananise variances.
Kubatsira-Kurovedza vamwe HOWTO kuita danho.
Service zvevhiki-Anonyatsoratidza kutsvaka mazano kubatsira vanhu.
Advanced Problemsolving Kuziva dzakaoma nyaya uye kuongorora kwakabatana chokwadi vanoongorora uye kuvaka nesarudzo nekuita mikana.
Operations Research-Kudzidza nhumbi prerequisites uye kunoda kubudisa manyorero.
Technology Design-Building kana tsitsi maturusi uye ruzivo kubatsira munhu zvinodiwa.
Equipment Selection-Kusarudza maturusi uye midziyo yacho zvemarudzi aida zvakakomba kuuraya basa.
Yakavamba-kugadzwa yokutevedzera, mano, waya, kana Mabhokisi kuzadzisa Specs.
Development-Publishing ekombiyuta maererano zvinangwa kuti dzakawanda.
Operation Tracking-Vanochengeta nemiedzo, zvokuchunisa, kana zviratidzo zvakasiyana kuti chokwadi pane muchina achiita zvakakodzera.
Operations uye Bata-Kugadzirisa kushanda nehurongwa kana zvigadzirwa.
Maintenance-Kuita Nokuraramisa kuti purogiramu musi giya uye kusarudza apo uye kworudzii nazvo vachava zvakafanira.
Troubleshooting-Kuona zvinhu shure blunders kuti vari kushanda uye kusarudza chii nenhungamiro kuenda nezveizvi.
Repairing-vachigadzira zvirongwa kana zvigadzirwa kushandisa midziyo vari kutsvakwa.
Quality Kuzvidzora Kuongorora-Kuita yokuedzwa uye mazano mishonga, rubatsiro, kana nzira kutonga kugonesesa kana functionality.
View uye zvisarudzo-Kufunga zvikomborero uye mukuru mitengo matanho kuti zvinogona kusarudza zvakakodzera zvikuru munhu.
Analysis Kuziva kuti hurongwa worudzii vanofanira kushanda uye nzira kuvandudzwa mabasa, ezvinhu, pamwe kwezvakatipoteredza kungakanganisa zvikomborero.
Systems Yekuongorora-Kuona matanho kana zvinoratidza hurongwa kuita uye hama kuti zvinangwa zvenyika mudziyo, yakarurama kana kuti maitiro aifanira kuwedzera waivako.
Time-Management-Vanopa vamwe’ chiitiko uyewo oneis pachako nguva.
Administration pamusoro Financial Resources-Kusarudza sei mari achakurumidza kushandiswa kuva basa nokuzadzikiswa, uye rokutengesa nokuti mari idzi.
Administration pamusoro Zvaishandiswa Resources-Kuziva uye kucherechedza kusvikira kwakafanira zvigadzirwa, establishments, uye zvinoriumba vaiva vanofanira kuita zvimwe shanda.
Pokudzora Staff Resources-Pave, yaikurudzira, uye aitungamirira vanhu apo yavanobata, kusiyanisa zvakanakisisa vanhu nokuda basa.
Training Qualification Knowledge Kukosha
Kupfuurisa 4 makore, kusvika pa 6 makore uye kusanganisira,
Career Leadership Unyanzvi chinodiwa
Kubudirira / kuedza – 96.18%
rusimbiriro – 94.79%
purojekiti – 90.85%
simba – 90.08%
mushandirapamwe – 95.73%
Nyaya Vamwe – 96.80%
Social Positioning – 87.01%
Self Control – 96.39%
Pressure Houkago – 97.20%
Kusachinja-chinja – 99.20%
Kuziva Detail – 99.20%
rusununguko – 92.48%
kubudirira – 87.36%
kufunga – 91.53%